China 10ml ngeenxa ecacileyo iglasi isiqhumiso ibhotile kunye mveliso sokutshiza kunye nabenzi | Comi
Ibhotile yeglasi enobunzima
Bottle izithambiso Ibhotile
Ibhotile yeglasi yobushushu
Qengqeleka kwibhotile yesiqholo
Inkathalo yesitshizi seBhotile yesiqholo
Inkonzo ye-OEM ODM
3D Sample Ukwenza
10ml ngeenxa ecacileyo iglasi isiqhumiso ibhotile nesitshizi
Inombolo Inombolo: I-KMPB10-008
10ml mveliso unikezelo Hot Hot Glass Bottle-on Bottle
Ibhotile eyenziwe ngononophelo ukwenza inkangeleko eya kuhlala kakuhle ngaphakathi kwawo nawuphi na umrhumo wepremiyamu.
Iyafumaneka noluhlu lweeminqwazi kunye neempompo zokutshiza.
Ecacileyo, iglasi yeprimiyamu eshinyeneyo Iyafumaneka kuluhlu lweekepusi kunye neeatomisers
Ilungele iziqholo kunye neziqholo zasekhaya
Ibhotile yeglasi ecoliweyo ecoliweyo ilungile kuluhlu lolwelo lweziqholo zekhaya. Iibhotile ezomeleleyo eziveliswa ngeglasi eshinyeneyo, ezivumela ukuba ibhotile iphinde isetyenziswe. Sineendidi ezininzi zeebhotile ezicoliweyo zeglasi.
Iibhotile zethu ezisemgangathweni zibekwe ngokufanelekileyo ukunceda uphawu lwakho. Kananjalo unokukhetha ukuba neyakho ibhotile yeglasi eyilelweyo. Indlela yokuphila inesakhono sokuyila umhombiso weebhotile zevumba elimnandi kunye neengqayi ukuya kwinqanaba eliphezulu.
Njengomboneleli wezikhongozeli zeglasi ezisemgangathweni, sinokubonelela ngeglasi yewayini, i-decanter, ibhotile yevumba kunye nebhotile yeziqholo. Ukuthengisa kwangaphambili kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa yinto yethu.
I-KMPB10-008 10ml 17mm 100mm 37g
Amafutha omntu, ioyile yamakha
IZINTO / UHLOBO
Ibhotile Iglasi yeFlint ephezulu
Cap Aluminium kunye nePP
Isitshizi seAluminiyam kunye nePP
Ukutyabeka ukuShicilela ukuShicilela ukuHambisa okuShushu okuShushu kweSinyithi
Inkqubo yeglasi yeglasi ecacileyo:
1. Izithako: ngokomthetho oyilwayo wezinto, kala ubunzima bezinto ezisetyenzisiweyo: isanti ye-quartz, ilitye lekalika, i-feldspar, isoda ash, i-boric acid, njl. Kwaye uzixube ngokulinganayo kwi-blender.
2. Ukunyibilika: Izinto ezilungisiweyo ziyashushubezwa eziko ukuze zenze ulwelo olufanayo, olungena bubble kwiglasi nge-1600 ℃ Celsius.
3. Ukuyila: le yinkqubo yokupholisa.Iiglasi kuqala zitshintsha ukusuka kulwelo olubonakalayo luye kwimo yeplastiki emva koko ibe kwimeko eqinileyo etyumkileyo.
4. Ukupholisa: iqondo lobushushu bebhotile yeglasi liphezulu kakhulu xa lisandul 'ukwenziwa, kwaye lifuna inkqubo yokucothisa kancinci ukuyipholisa phambi kokuba ichukunyiswe ngesandla.
5.Hlola: ibhotile nganye yeglasi kufuneka ihlolwe ngumhloli ukuqinisekisa ukuba akukho ziphene, ezinje ngokuqhekeka, amaqamza, ukungcola, ukuthambeka emazantsi, njl.
6.Ukupakisha: sebenzisa iibhokisi okanye iipelethi zokupakisha ngokweemfuno zabathengi.
Iimpawu zeebhotile zeglasi:
1. Ayiyityhefu kwaye ayinancasa; elubala, entle, elungileyo yepropathi yokuthintela, engangeni moya, izinto ezininzi ezibonakalayo, amaxabiso asezantsi, kwaye inokusetyenziswa kaninzi.
2.Ukuba nonobushushu obunganyangekiyo, obunokumelana noxinzelelo bokucoca, zombini inzalo enobushushu obuphezulu, inokuphinda kugcinwe.
3. Ngokuhambisa ukukhanya okutywiniweyo kunokugcina iimveliso ezibuthathaka kakhulu ukufuma ixesha elide.
4. Olona khetho lufanelekileyo kubalulekile ioyile / ulwelo olunuka kamnandi / ulwelo lwezithambiso njl.
Itekhnoloji yokulungisa emva kweglasi:
1. Tshiza ipeyinti: bonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezibandakanya izinto ezibonisa ngaphaya, matte, opaque, shiny, multicolored, pearlles pearl kunye nokukhanya kwesinyithi.
2.Ukuprinta-kusetyenziswa ukongeza amagama kunye neepateni kwiibhotile zeglasi. Faka idyasi (yokutshiza) ivanishi. Emva kolu nyango, ibhotile yeglasi ifafazwa iphelele okanye inxenye. Emva koko faka ibhotile yeglasi kwi-oven yokumisa kwaye ubhaka kwi-650 °.
3.Frosting: (unyango Acid) Isiphumo frosting lwebhotile yeglasi kwi ibhafu acid.
Ukunyathela Hot: ipleyiti igama logo okanye ipateni kwibhotile yeglasi.
5.Sandblasting: Igama okanye umfanekiso onika isiphumo sematte kwicandelo lebhotile yeglasi.
ICOMI AROMA -ezona bhotile zeglasi zibalaseleyo kwiimveliso zakho zeoli yobulawu!
Uhlobo lweBhotile yeGlasi Plain Glass Bottle, Simple Clear Bottle, Heavy Bottle, Ukutyeba Glass Bottle
Imilo yeglasi yeAntuque Ibhotile ejikelezayo, Ibhotile yesikwere
Iinkcukacha zokupakisha Iibhokisi zokuthumela ngaphandle kweqanda ngePallet yokuThumela kwelinye ilizwe
Eyona nto ibalulekileyo, imveliso elungileyo. Abathengi bam bangaphezu kwenyanga ngale mveliso
Umhla owongeziweyo: 21/04/2020 ngu Ilanga
ugqibelele, ukusukela kungqiba de kube sekupheleni
Umhla owongeziweyo: 21/04/2020 ngu UVilana Bagdone
inkonzo enkulu, imveliso wanelisekile, kwaye enkulu emva kwenkonzo yokuthengisa. enkosi
Umhla owongeziweyo: 27/04/2020 ngu USerena Ghian
Egqithileyo 15ml Hot Sale Custom Round Clear Glass Roll kwiBhotile kunye Stainless mqengqeleki Ball
Okulandelayo: 30ml Ihowuliseyili ecacileyo izithambiso iglasi iibhotile Sprayer Perfume iibhotile
iziqholo ezitshiphu zevenkile ethengisayo
Imilo Square 10ml Roll Ibhotile kunye Shinny Go ...
Ihowuliseyili Glass Beer isiqhumiso
Ibhotile yeglasi yesiqholo seBhola ye-10ml
10ml Ihowuliseyili engenanto Cosmetic Packaging Fragran ...
Matte Black 10ml Glass iibhotile mqengqeleki
Yongeza: No. 1500 Tingwei Road, Isithili saseJinshan, eShanghai, China.
Umnxeba:0086- (0) 516-83202223
Intsingiselo yophawu kwi-oi ebalulekileyo ...
Indlela yokukhetha amandla kunye nokupakisha ...
iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo - Indawo ekuSelfowuni